Onye mọnk nke rere Ferrari ya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akụkọ
Onye mọnk nke rere Re Ferrari bu akwukwo enyemaka onwe onye zuru uwa dum nke edeputara site na onye okwu okwu na onye edemede Robin Sharma. Ebiputara na 1999 site na otu ndi oru Harper Collins Publishers, ere ya na ihe kariri mba 50 ma sugharia ya karia asusu 70. Ruo 2013 enwere ihe karịrị nde nde atọ ere Monk Onye rere Ferrari Ya (na Bekee).
Edere ederede sitere na ahụmịhe onye edemede Onye mba Canada. Sharma, mgbe m dị afọ iri abụọ na ise, kpebiri ịhapụ nke ya ugwu carrera ọkàiwu ikpe ka mmiri zoo en na-achọ n'onwe ya. Ihe si na ya pụta bụ ụzọ nke ịchọpụta onwe ya ghọrọ akụkọ azụmahịa nke ọ chọrọ ịkọrọ ụwa wee nye usoro.
1 Nyocha na nchịkọta nke onye mọnk ahụ rere Ferrari ya
1.1 Zọ onye ọka iwu
1.1.1 A mmadụ nwere ihe niile na ndụ?
1.1.2 Ihe ahụ merenụ
1.1.3 Nloghachi nke mọnk
1.1.4 Mgbanwe ahụ
1.1.5 Usoro Sivana
1.2 Akụkọ ifo
1.2.1 Udiri ndu n’adabere n’uche echiche
1.2.2 Ebumnuche nke ndụ (Dharma)
1.2.3 Ike ịdọ aka ná ntị
1.2.4 Na-egbochighi ndị ọzọ ozi ma mikpuo onwe gị ugbu a
2 Usoro na omume akọwapụtara n'akwụkwọ ahụ
3.1 Ọmụmụ, nwata na ọmụmụ ihe
3.2 Robin Sharma, onye edemede
3.2.1 Akwụkwọ ndị ọzọ nke Robin Sharma bipụtara
Nyocha na nchịkọta nke Onye mọnk nke rere Re Ferrari
Zọ onye ọka iwu
A mmadụ nwere ihe niile na ndụ?
Julian Mantle, onye ọka iwu ikpe ụlọ akwụkwọ Harvard a ma ama nke gụsịrị akwụkwọ, yiri ka ọ nwere ihe niile na ndụ. Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ? Salariesgwọ ọnwa ya karịrị otu nde dollar kwa afọ, ọ bi na nnukwu ụlọ ma nwee uhie uhie Ferrari. Otú ọ dị, ọdịdị dị aghụghọ: Mantle nọ n'oké nrụgide n'ihi oke ọrụ ya.
Ihe ahụ merenụ
N'agbanyeghị ahụike ya na-arịwanye elu, onye protagonist nakweere okwu siri ike ma na-achọsi ike. ruo otu ụbọchị ọ na-ejide obi obi n'ụlọ ikpe zuru oke. Mgbe ọdịda ahụ gasịrị, Mantle kwụsịrị ime iwu., Ọ na-efu nke ndụ ọha na ndị ọrụ ibe ya na ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ, ahụghị ya anya ọzọ. Asịrị na-ekwu na ọ gara Eshia.
Onye mọnk rere ree ...
Nloghachi nke mọnk
Eziokwu bụ na onye ọka iwu rere ala ya na ụgbọ ala ya, Ihe a niile iji chọta ihe bara uru na ndụ gị. Mgbe afọ atọ gasịrị, Mantle laghachiri n'ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ; ọ gbanwere, na-enwu gbaa, na-ahụ ezigbo ahụike, na-enwe ọ happinessụ. N'ebe ahụ, ọ kọọrọ ndị ọrụ ibe ya na ya gara India ma mụta banyere ụfọdụ yogis ndị na-etobeghị.
Na Kashmir, Mantle zutere onye maara ihe nke Sivana, onye gbara ya ume a gaa n'ihu na Himalaya. N'etiti ugwu kachasị elu n'ụwa, onye protagonist kpebiri ịnọ ma soro ụfọdụ ndị mọnk biri - ndị amamihe nke Sivana. wee chọta onwe ya.
Yogi Ramán kọọrọ onye ọkaiwu mbụ ya ihe niile ọ maara. N'ụzọ ahụ, Mantle mụtara ichekwa ike ya iji bie ndụ jupụtara na ndụ, juputara na echiche okike na uru. Nanị onodu nna ya ukwu nyere onye ọ na-amụrụ ihe bụ na onye nke ikpeazụ a kwesịrị ịlaghachi n'ebe ọrụ ya ochie wee kee ụkpụrụ nke usoro Sivana.
N’etiti ubi mara mma ma dịkwa jụụ eke, enwere nnukwu ulo oku nke uhie si n’ime ya puta ma buru oke mmiri. Onye agha a na-eyi obere eriri pink nke kpuchiri akụkụ ahụ ya. Mgbe ọ malitere ịgagharị n’ubi ahụ, o nwetara chronograph ọlaedo nke mmadụ hapụrụ n’ebe ahụ.
Obere oge, onye agha o zobere ya daa daa onwe ya. Mgbe edemede, lere anya n'aka ekpe ya wee chọpụta a ụzọ kpuchie na diamondsụzọ na-eduga obi ụtọ na ịdị adị zuru oke…). Na mbido, akuko akuko a yiri ka o bu akuko ifo, na enweghi isi. Agbanyeghị, nke ọ bụla n'ime akụkọ a nwere nkọwa dị ike yana igodo ndị akọwapụtara n'okpuru:
Udiri ndu n’adabere n’uche echiche
Akuko ifo nke ihe ọ fụ theụ ihe ọ juiceụ juiceụ na-egosipụta nke ahụ terychịkwa uche bụ ihe dị mkpa iji bie ndụ zuru oke. Ọ bụ ezie na mmejọ na ọdịda (nsogbu) bụ akụkụ nke ịdị adị, mmadụ ekwesịghị ikwe ka enweghị isi gafere. Kama, onye ode akwụkwọ na-agba ume ka a na-enwe nchekwube site na ịchịkwa echiche.
Ebumnuche nke ndụDharma)
N'akụkọ ifo nke ihe ọ juiceụ juiceụ ihe ọ juiceụ juiceụ, ụlọ ọkụ na-acha ọbara ọbara na-apụta, nke sitere na njirimara a pụta. Ihe owuwu a na-anọchite anya ndị mmadụ ga-enwerịrị iji nweta ha Dharma. Nke ahụ bụ, ebumnuche ahụ dị egwu nke mmadụ ga-enweta naanị site na ịnabata onyinye na onyinye mmadụ, tinyere nnabata nke egwu iji merie ma merie ha.
Ike ịdọ aka ná ntị
A ghaghị iji nlezianya jikwaa oge. Na akụkọ ifo Uwe ahụ pere mpe nke ihe ọ theụ juiceụ ihe ọ theụ symboụ na-ese onyinyo ọzụzụ onwe onye. N'akụkụ a, usoro Sivana na-akọwapụta na nkwa ịgbachi nkịtị ruo ogologo oge dị mma iji wusie ike uche ndị mmadụ.
N'otu aka ahụ elekere ọla edo bụ ihe nnọchianya nke nsọpụrụ nke ndị maara ihe nwere maka njikwa oge ha. N'ihi na onye nwere ike ijikwa oge ya bụ onye nwere ike ijikwa ndụ ya na ịnụ ụtọ oge ọ bụla. N'iburu nke a n'uche, ọ dị mkpa ịmụta ịsị "mba" iji zere igbu oge na mmemme ndị ị na-achọghị yana ịhazi ụbọchị gị nke ọma.
Na-egbochighi ndị ọzọ ozi ma mikpuo onwe gị ugbu a
The "ebe a na ugbu a" bụ ihe kasị mkpa oge niile; Nanị n'ụzọ a ka enwere ike ịnabata ezi akụ (diamonds) nke ụzọ ndụ. Na mgbakwunye, iji mee ka oge nke ọ bụla bụrụ ihe na-akwụghachi ụgwọ, ndị mmadụ ga-arara onwe ha nye ijere ndị ọzọ ozi N’atụghị anya inweta ihe ọ bụla. N'echiche a, ndị mọnk gwara Mantle na "site n'inyere ndị ọzọ aka ị ga - enyere onwe gị aka."
Usoro na omume akọwapụtara n'akwụkwọ ahụ
Obi nke rose, mmega ahụ iji merie uche;
Nzọụkwụ ise iji mee ka ihe mgbaru ọsọ doro anya ma doo anya:
Were uche nke uche
"Anwansi 21 ụbọchị ọchịchị" maka imepụta agwa ọhụrụ
Nwee usoro niile;
Ememe 10 maka ndụ na-egbuke egbuke:
Omume nke owu ọmụma
Omume nke anụ ahụ
Ihe omuma nke otutu ihe omuma
Ritual nke echiche onwe onye
Mantra na-akpali mmụọ (okwu okwu ọnụ)
Omume nke congruence
Ritual nke mfe;
Nkụzi onwe onye: ọ bụghị ikwu maka ụbọchị dum;
Nkeji XNUMX nke ịhazi ụbọchị na otu elekere kwa izu;
Ntụgharị uche kwa ụbọchị banyere otu esi egosi mmetụta ịhụnanya, nyere ndị ọzọ aka, ma nwee ekele kwa ụbọchị.
Ọmụmụ, nwata na ọmụmụ ihe
A mụrụ Robin Sharma na Uganda na 1965. Ọ bụ nwa nwoke nna Hindu na nne Kenya. Ha kpọgara ya Port Hawkesbury, Canada, mgbe ọ dị obere. N'ebe ahụ, ọ nọrọ oge nwata ya na oge ntorobịa ya, oge nke ọ raara onwe ya nye n'ịmụ bayoloji. Mgbe e mesịrị, Ọ nwetara akara ugo mmụta Master na Iwu na Mahadum Dalhousie, Nova Scotia.
N'ụlọ akwụkwọ ahụ ọ kụziri klaasị iwu wee malite ịzụlite ikike ikwu okwu ya. N'ikpeazụ, se ghọrọ onye ọka iwu a ma ama ruo mgbe o kpebiri ịgbanwe ụzọ ndụ ya nke ọma ma hapụ ọrụ ya na iwu. Taa, Sharma bụ onye ama ama n'ọtụtụ mba n'ihi ọtụtụ nkuzi na ebumnuche ya.
Robin Sharma, onye edemede
Mmalite Sharma na mbipụta akwụkwọ pere ezigbo mpe. Ihe omumu akwukwo ya bu Megaliving!: 30bọchị XNUMX maka ndụ zuru oke (1994), nne ya bipụtara ma dezie ya. Akwụkwọ nke abụọ ya - nke bipụtara onwe ya na 1997 - bụ Onye mọnk nke rere Re Ferrari.
Akwụkwọ ndị mọnk bụ prose lyric nwere njirimara autobiographical na ụzọ nke uto ime mmụọ nke ọkàiwu kpebisiri ike ịkwụsị ịhụ ihe onwunwe n'anya nke ndụ ya kwa ụbọchị. A bịara mara akụkọ a n'ezie mgbe Ed Carson, onye bụbu onye isi oche nke Harper Collins, "chọtara" ederede na ụlọ ahịa akwụkwọ Canada. Aha ahụ ga-amaliteghachi na 1999.
Akwụkwọ ndị ọzọ nke Robin Sharma bipụtara
Igodo 8 maka ndu nke onye mọnk ahụ rere Ferrari ya (Amamihe ndu sitere n’aka Monk Onye Reere Ferrari Ya, 1998);
Onye ga-eru uju mgbe ị nwụrụ? (Onye Ga-akwa Egwu Mgbe Die Nwụrụ: Ihe Mmụta Ndụ site na Monk Onye Reere Ferrari Ya, 1999);
Onye nsọ ahụ, onye na-eme njem na onye isi ọrụ (Onye Nsọ, Surfer, na CEO, 2002);
Onye ndu nke n’enweghi ọnọdụ (Onye Ndú nke Na-enweghị Aha, 2010);
Akwụkwọ ozi nzuzo sitere n'aka onye mọnk ahụ rere Ferrari ya (Akwụkwọ Ozi Nzuzo nke Monk Onye rere Ferrari Ya, 2011);
Mmeri (Little Black Book maka Pụtara Ọma, 2016);
5lọ elekere ise nke ụtụtụ (Nke 5 AM Club, 2018).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Onye mọnk nke rere Re Ferrari
Marmụ nwoke Marías. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ikpeazụ Dove